I-DJI Phantom 4: izici zobuchwepheshe nezokuqhathanisa | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
I-DJI Phantom 4: izici zobuchwepheshe nezokuqhathanisa
I-DJI iyinkampani yezobuchwepheshe yaseChina eyaziwa futhi ewina imiklomelo. Kunikezelwe ekuklameni nasekukhiqizeni ama-drones wokuthwebula izithombe zasemoyeni. Ikhwalithi yayo yinhle futhi izici zemodeli ngayinye ye-drone ziyenze yaba ngeyokufunwa kakhulu futhi ephumelela kakhulu emakethe. Abagcini ngokuba ngabaholi bokuthengisa kuphela, futhi futhi basetshenziselwa kakhulu umsebenzi wethelevishini, umculo, imboni yamafilimu ukuqopha, njll.
Okwamanje imele cishe i-70% yesabelo semakethe ye-drone, futhi kungaba ngaphezulu uma uhlunga kuphela imakethe yobuchwepheshe. Eqinisweni, i-DJI iwine i-2017 Umklomelo we-Technology & Engineering Emmy ngobuchwepheshe bayo bamakhamera afakwe ama-drones. Futhi uma kukhona imodeli ye-drone evelele, lokho kunguchungechunge lwe-Phantom.
1 Yini engingayisebenzisela yona futhi yini engingeke ngiyisebenzisele yona?
1.1 Ngabe ngidinga ukuthenga i-drone yobuchwepheshe?
2 Umehluko nezinye izinhlobo ze-DJI
3 Izici zobuchwepheshe ze-Phantom 4
3.1 I-Phantom 4
3.2 I-Phantom 4 Pro
3.3 I-Phantom 4 Pro +
3.4 Phantom 4 Kuthuthukile
3.5 I-Phantom 4 Advanced +
4 Ukuthuthuka kwe-DJI Phantom 3
4.1 I-DJI Phantom 5 yesikhathi esizayo
Yini engingayisebenzisela yona futhi yini engingeke ngiyisebenzisele yona?
Ama-DJI drones ikakhulukazi yakhelwe ukwenza imisebenzi yokuqopha kanye / noma yokuthwebula isithombe. Akuwona amamodeli we-aerodynamic futhi engasindi wokujaha. Ngakho-ke uma ufuna i-racing drone, i-DJI akuyona inketho engcono kakhulu. Kepha ukusimama kwayo nezimpawu zayo kuyenza iphelele kubathandi bezimfundamakhwela nabachwepheshe ukuthi badubule ividiyo bathathe nezithombe zasemoyeni. Ngalokho kungenye yemikhiqizo emihle kakhulu ongayithola.
Kwesinye isikhathi nami ngiceliwe ukuthi uma ukwazi ukuphakamisa isisindo, ngokwesibonelo, ukuphatha izinto zokusindisa noma izimpahla ezindaweni ezingafinyeleleki ukuhlenga, njll. Iqiniso ukuthi i-Phantom quadcopter ingaphakamisa amagremu angamakhulu ambalwa, kepha aklanyelwe ukuthwala isisindo ngaphezu kokusekelwa nemishini yezithombe abayiphethe. Uma uyikhumula ungalayisha enye into ... Okuqinisekayo ukuthi kukhona i-DJI S900 (noma i-Industrial series) enophephela abayi-6 abangalayisha kufika ku-5 kg, inani elikhulu impela.
Isiphetho, uma ufuna i-drone enhle ukuqondisa noma ukuthatha izithombe ezinhle, I-DJI ukukhetha okuhle. Ngokujaha nezinye izinhloso, kufanele ucabange ngokubona okunye okwehlukile...
Ngabe ngidinga ukuthenga i-drone yobuchwepheshe?
Uma usaqala futhi awukaze uzame eyodwa, impendulo ithi cha. Kufanele uqale ngemodeli eshibhile ukuze uyijwayele. Kungakhathaliseki ukuthi ungumuntu othanda ukuzilibazisa noma ochwepheshe, ungangabazi ukuthi i-DJI inemikhiqizo emihle kakhulu kuwe.
Uma impendulo inguyebo, kufanele futhi uzibuze inguqulo ye-DJI noma imodeli oyidingayo. Isibonelo, uma uzothwebula izithombe nevidiyo nge-Phantom, ungahle uhlalele i-DJI Phantom 3 Pro uma ungumuntu othanda ukuzilibazisa. Kepha uma udinga noma yini enye, hamba uqonde eyodwa yezinguqulo ze-DJI Phantom 4.
Umehluko nezinye izinhlobo ze-DJI
I-DJI inezinhlobo eziningi ze- yanelisa izidingo ezahlukahlukene zabasebenzisi bayo. Amamodeli aphawuleka kakhulu yile:
DJI Spark: kuwo wonke umuntu ofuna i-drone elula futhi elula. Inketho enhle yezimfundamakhwela. Zishibhile futhi azinkulu ngosayizi, kepha ikhwalithi nobuchwepheshe kusengaphezulu kokuhlonipheka. Kepha ungalindeli izinzuzo noma ubuchwepheshe amanye amamodeli aphezulu anakho ...
U-DJI Mavic: ziphindwe kabili ngentengo ku-Spark, ngakho-ke akuzona izindiza ezishibhile. Lolu chungechunge luthandwa kakhulu ngabalandeli bezithombe zasemoyeni namavidiyo. Inomklamo oyinkimbinkimbi nezindlela zokundiza ezihlakaniphile, ezinokuzimela okuhle, isivinini, ukuzinza nokuthula impela. Kunezinhlobo eziningana zale drone, njenge-Air, Pro, Platinum, njll.
UDJI Phantom: Yinkosi ye-quadcopter eqinile. Kuhle ukuphatha ikhamera esezingeni eliphakeme esitendini sayo ukuthatha izithombe ezinhle kakhulu nokuqopha ividiyo enencazelo ephezulu. Intengo yayo iphezulu, kepha kuyifanele imali ukuthola imiphumela emihle kakhulu. Yingakho kuyintandokazi kubachwepheshe bezithombe. Njengamanje, bafuna inguqulo yesi-4, futhi njengaleyo eyedlule, kunezinhlobonhlobo ezifana nokujwayelekile ne-Pro ne-Pro Plus, ebiza kancane, kepha enokwengeziwe.
UDJ Inspire: olunye uchungechunge lwama-drones anezinjini ezi-4 namandla amakhulu nokushesha ukwenza ukuqoshwa okuhle kakhulu kokuhamba. Isibonelo, ukuthatha ama-movie shot, landela abantu ngokuhamba, izimoto, njll.
UDJI Goggles: intengo yayo iphakeme kancane kuneSpark, kepha ishibhile kunePhantom neMavic. Le modeli ilungele kakhulu ukusetshenziswa nezibuko ze-FPV, ezenzelwe ukuba nesipiliyoni sendiza egcwele ngokuphelele. Ukuhamba kwekhanda lakho kuzoshintsha ukuma kwekhamera ukuze ukwazi ukubona konke ngesikhathi sendiza. Ngendlela, lokho akusho ukuthi okwedlule akuhambisani ne-FPV, kuphela ukuthi lokhu kuhlanganiswe kangcono nalobu buchwepheshe.
I-DJI Yezimboni: luchungechunge olukhethekile lokusetshenziswa okucacile ngokuthe xaxa. Bangakwazi ukuphakamisa isisindo esithe xaxa ngoba imvamisa banama-rotor afika kwayi-8 esikhundleni se-4 ejwayelekile. Zisetshenziswa impela embonini yezolimo.
Ungathenga futhi uqhathanise noma iyiphi yalezi zinhlobo kumamodeli we- isitolo esisemthethweni se-DJI ngeSpanishi. Uzothola nenani elikhulu lezesekeli (izisekeli, amakhamera, ...) lazo zonke iziqephu.
Manje njengoba wazi izici zamamodeli we-DJIAke sihambe nePhantom 4, elinye lamagugu omqhele womkhiqizo ...
Izici zobuchwepheshe ze-Phantom 4
El owokugcina ukujoyina lolu chungechunge kube yi-Phantom 4, ngokuthuthuka okuphawulekayo kumamodeli wangaphambilini. Izici zobuchwepheshe zale drone ziyamangalisa.
Kuyinto okuyisisekelo kochungechunge lwe-Phantom 4, ngokusebenza kahle nezimpawu zobuchwepheshe engizichaza lapha:
Isisindo: 1380 g
Ijubane lokukhuphuka: kufika ku-6m / s (kuya ngemodi yendiza)
Isivinini sendiza enkulu: kufika ku-72 km / h (kuya ngemodi yendiza)
I-engeli enkulu yokuthambekela: kufika ku-42º (kuya ngemodi yendiza)
Isivinini esikhulu se-angular: kufika ku-250º / s (kuya ngemodi yendiza)
Ukuphakama okukhulu: 5000m
Ukumelana okukhulu komoya: 10m / s
Impilo yebhethri: 28 min approx. kufakwe nebhethri le-5350mAh Li-Po neshaja
Ukusebenza kwebanga lokushisa: 0-40ºC
Uhlelo lwe-geolocation: GPS + GLONASS
Ukuqiniswa: izimbazo ezi-3
Ikhamera: 12.4 MP CMOS f / 2.8 ukuvula, ngokusekelwa kwe-HDR ne-UHD (4K)
Imemori khadi: isekela i-microSD efinyelela ku-64 GB UHS-1 ikilasi
Imvamisa yesilawuli kude: 2.4 Ghz (kude nokusekelwa kwamadivayisi eselula) I-Lightbridge ethuthukisiwe
Uhlelo lokutholwa kwesithiyo: i-5-way enamasethi amathathu wezinzwa (ngaphambili, ngemuva, ngezansi nasezinhlangothini)
Uhlelo lokusebenza lweselula lwe-Image Relay: I-DJI GO 4 ye-iOS ne-Android (ene-220ms latency)
Intengo: ngu. € 1100
I-Phantom 4 Pro
La Uhlobo lwe-DJI Phantom 4 Pro yinguqulo ethuthukisiwe maqondana nesisekelo, nokunye okwengeziwe. Kufaka konke lokhu okungenhla okuhlanganisiwe:
Ukuphakama kwebanga noma okuphezulu: 6900 m
Impilo yebhethri: 30 min approx.
Inzwa yekhamera: I-CMOS 20MP
Lokhu kuthuthukiswa kumele i- ukwanda kwentengo cishe kwe- € 500, okungukuthi, kuzoba ne- Intengo elinganiselwa ku- € 1600.
I-Phantom 4 Pro +
La Uhlobo lwe-DJI Phantom 4 Pro Plus Kungukuthuthuka ngaphezu kwenguqulo yePro, nokukhuphuka kwentengo encane kunangaphambilini. Ukuthuthuka, kufaka phakathi yonke into i-Phantom 4 eyisisekelo engaba nayo nayo, yile:
Isilawuli se-control: nesikrini esifakiwe esingu-5.5-intshi, siqeda isidingo sokusebenzisa umakhalekhukhwini
Imvamisa yokulawula umsakazo: ungasebenzisa i-2.4 ne-5.8 Ghz ukunciphisa ukuphazamiseka
Phantom 4 Kuthuthukile
El I-DJI Phantom 4 Kuthuthukile Ihluke kancane kwi-Pro.Ihlanganyela kakhulu izici ne-Phantom 4, ngokusobala, kepha ngezici ezilandelayo ezihlukanisa ne-Pro:
Uhlelo lokuthola izithiyo- Inenzwa yesithiyo esivela ngaphambili nangaphansi kuphela, kepha iqeda zonke izinzwa ezivela ngemuva nasezinhlangothini. Ngakho-ke, uma ungayilawuli kahle, ingahle ishayisane nezingqinamba eziseceleni nezingemuva ... Okungukuthi, ingaphansi ngokweqile kulokhu ku-Pro.
Isisindo: 20g elula
Ngakho-ke, kuyindlela eyodwa kuthambekele kuya kochwepheshe abaningi nokuthi bazi kahle ukuvivinywa kwalezi zinto zobuciko. Esikhundleni salokho, intengo iphakathi kwe-base Phantom 4 ne-Pro, okungukuthi, akubizi kangako njengePro noma iPro Plus.
I-Phantom 4 Advanced +
Uma sithatha i-Advance njengesethenjwa, i I-DJI Phantom 4 Advanced Plus unayo kuphela intengo ecishe ibe ngu- € 100 ngaphezulu. Izici zicishe zifane. Ukuphela kwento eyehluka ngukuthi:
Isilawuli kude: kufakwe isikrini esingu-5.5.
NjengasePro + uma kuqhathaniswa nePro.
Ukuthuthuka kwe-DJI Phantom 3
Uma uzibuza ukuthi i- I-DJI Phantom 4 vs. Phantom 3, kulula ukuyichaza. Uma siqhathanisa i-Phantom 3 Standard nesisekelo se-Phantom 4 sinokulandelayo:
Ibanga: 1000m vs 5000m
Ukuzimela: 23 min vs 28 min
Isisindo: 768g vs 1380g
Inzwa yekhamera: 12MP FullHD CMOS vs 12MP 4K CMOS
Ukuxhumana: I-WiFi ne-Enhanced Lightbridge (ngaphezu kwe-x4 speed vs WiFi)
Isikhombi sendawo: GPS vs GPS + GLONASS
Intengo: ngu. € 728 vs cishe. € 1100
Vele ubuchwepheshe nezindlela zokushayela sezithuthukile. Ngamafuphi, kufinyelelwe idrone yekhwalithi ephezulu nezinzuzo, yize futhi inesisindo esiphakeme kakhulu. Eqinisweni, kukhona nezinhlelo eziningana ze-Phantom 3, njenge-Pro ne-Advance. Uma siqhathanisa izici ze-Phantom 3 Pro, zifana kakhulu nalapho iqala khona i-Phantom 4, okungukuthi, ibanga le-5000m kude nekhamera ye-12MP enamandla we-4K.
Ngaleso sizathu, uma ufuna imodeli efana ne-base Phantom 4, kepha ngentengo eshibhile, unga thenga i-Phantom 3 enentengo ephansi njengoba indala. Ukuphela kwento esezingeni eliphansi kakhulu ukuxhumana phakathi kwe-drone nesilawuli, okuthuthuke kakhulu ku-4.
I-DJI Phantom 5 yesikhathi esizayo
Yini esingayilindela kusuka ikusasa le-DJI Phantom 5 I-drone enokuthuthuka okukhulu phezu kwe-4. Yize i-Phantom 4 manje imele phezulu kuhla lwe-DJI, ngeke kuthathe isikhathi eside ukuthi isizukulwane esilandelayo size. Uma sihlaziya ukwenziwa ngcono kwe-4 maqondana ne-3, singalindela i-drone ngokuthuthuka kwamaphuzu amaningana:
Ukuzimela- I-DJI Phantom 5 kungenzeka ibe namandla kakhulu kune-4, kepha ububanzi bayo kungenzeka futhi bube ngcono kakhulu. Mhlawumbe ngemizuzu embalwa kuzodlula isigamu samanje sehora abavame ukuhlala kulo.
Conectividad: Kungahle kube nokuthuthuka kubuchwepheshe beLightbridge, ngoba uma isigaba esibonakalayo sithuthukisiwe, isixhumanisi esingcono sizodingeka futhi ukugwema ukubambezeleka nokuthi umkhawulokudonsa uphezulu.
Finyelela: Mhlawumbe iPantom 5 entsha izokweqa umgoqo ongu-7000m.
Ikhamela- Ikhamera izoba ngenye yezinto ezizoshintsha kakhulu, mhlawumbe ngezinga eliphakeme le-FPS le-4K futhi nekhono lokuthwebula i-8K.
Ngiyethemba nginawe isize ekukhetheni i-drone futhi usule ukungabaza kwakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » drones » I-DJI Phantom 4: izici zobuchwepheshe nezokuqhathanisa
I-RJ45: konke mayelana nesixhumi senethiwekhi